Faahfaahino Laga Helayo Qaraxyo Ka Dhacay Isgoyska Fagax. – Bogga Calamada.com
Faahfaahino Laga Helayo Qaraxyo Ka Dhacay Isgoyska Fagax.
Waxaa sii kordhaya khasaaraha maleeshiyaatka dowlada Ridada kasoo gaartay qaraxyo xiriir ah oo lagula beegsaday isgoyska Fagax ee magaalada Muqdisho.
Qaraxyadan maanta duhurkii ka dhacay isgoyska Fagax ee degmada Yaaqshiid ayaa lala eegtay isku imaatin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka loo yaqaan ‘Xasilinta Caasimadda’iyadoona dhawaaqa qaraxyadan laga maqlay qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho.
Inta la xaqiijiyay qaraxyadan waxaa lagu dilay Shan askari oo ka tirsan maleeshiyaatka dowlada Ridada gaar ahaan kuwa isku magacaabay Xasilinta Caasimada sidoo kale qaraxyadan waxaa ku dhaawacmay Saddex askari.
Weeraradan qaraxyada ah ee lagu dilay laguna dhaawacay maleeshiyaatka Murtadiinta waxaa sheegtay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin,waxeyna qaraxyadan kusoo aadayaan xilli ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah dowlada Farmaajo ee ay ka fulinayaan gudaha magaalada Muqdisho.